Haverina manontolo io antoka io ho an’ny kandida ben’ny tanàna na ny lisitra mahazo 10% no ho mihoatra ihany. Fandraisana anjara amin’ny fanontana ny bileta tokana no ambara fa anton’io, ka arakaraka ny sokajin’ireo kaominina izay anto-bola izay. Ny eto Antananarivo Renivohitra no ambony indrindra. Ho an’ny tanàn-dehibe sokajy voalohany, dia 5 000 000Ar io antoka io, raha toa ka arakaraka ny isan’ny mpanolotsaina monisipaly kosa ho an’ny kaominina an-tanàn-dehibe sokajy faharoa. Raha 19 ny isan’ny mpanolotsaina, dia 2 000 000Ar ny antoka, 1 100 000Ar raha 15 izany, 1 000 000Ar raha 13 ny mpanolotsaina, 900 000Ar raha 11 ary 800 000 raha miisa 9 izany. Ho an’ny kaominina ambanivohitra kosa, dia 700 000Ar raha manana mpanolotsaina 7 ilay kaominina, ary 600 000Ar kosa raha miisa 5. Rehefa atao ny kajikajy sy ny fampitahana, dia nampitomboina avo roa heny amin’ilay tolo-kevitra nataon’ny CENI tamin’ilay fifidianana saika hatao ny 28 oktobra saingy tsy tanteraka fa izao nihemotra ho amin’ny 27 novambra izao. Ambony ny antoka mitaha amin’ny hatrizay ka andrasana ny fanehoan-kevitr’ireo antoko politika na firaisamonim-pirenena samihafa, izay efa maro no nimenomenona tamin’ny fifidianana roa izay vita satria toa lasa fitadiavam-bolan’ny fanjakana. Volam-panjakana madiodio no tokony hanatanterahana fifidianana ben’ny tanàna fa tsy miala ao anaty kitapombolan’ny SACEM. Mila hatrany amin’ny 45 miliara ariary izany, izay tokony ho efa voasoritra ao anaty tetibolam-panjakana. Tsy misy vola ve ny fanjakana ka ny kandida no hovolosana ? Mety ho endrika sivana sy fanintsanana ankolaka sahady ny kandida madinika sy hampandresena ny kandidam-panjakana io amin’ny lafiny iray.